Enwe nke anọ: nkeji nke mbụ nke usoro 4MK Thrillers | Akwụkwọ ugbu a
Juan Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Black akwụkwọ
JD Barker kwuru
Enwe nke Anọ — Enwe nke Anọ na Bekee - bụ akwụkwọ akụkọ nke abụọ nke onye edemede America bụ JD Barker. Ebipụtara na June 2017, ọ bụ nkeji mbụ nke usoro 4MK Thrillers, nke ọha na ndị nkatọ nabatara nke ọma. Ọzọkwa, n'afọ ahụ akwụkwọ ahụ nwetara nturu ugo Apple E-Book n'ụdị "Excellence in Independent Publishing" na Audie maka onye na-enyo enyo kacha mma.
Ka ọ na -erule n'oge ahụ, amaara Barker nke ọma dịka onye mepụtara mpụ, egwu na akụkọ akụkọ sayensị na -ekele rapuru (2014), akwụkwọ akụkọ mbụ ya. N'ezie, ihe nkiri na ikike telivishọn nke Enwe nke anọ rere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ tupu ewepụta akwụkwọ ahụ na Paramount Pictures na CBS, n'otu n'otu.
1 Nchịkọta nke Enwe nke Anọ
1.2 Mmetụta uche
1.3 Onye e megburu
2.1 Omuma na mbụ
3.1 Ịbụ nwata, oge uto na ọmụmụ ihe
3.2 Ọrụ mbụ
3.3 Mmalite dị ka onye edemede
3.4 Idebe onwe onye edemede
4 Ozi JD Barker
4.1 Akụkọ mkpirikpi
4.2.2 Usoro ihe nkiri 4MK
4.2.3 Akwụkwọ akụkọ na mmekorita ya na James Patterson
4.2.4 Akwụkwọ ndị ọzọ
Na nchikota nke Enwe nke anọ
Aha akwụkwọ a na -ekwu maka ụkpụrụ omume ndị China nke enwe atọ maara ihe: ahụla ihe ọjọọ, anụla ihe ọjọọ, emela ihe ọjọọ. Maka nke a, site na ibe mbụ a na -atụ anya usoro ihe omume, a ga -eduzi ya na ụda nke onye ọrịa n'ezie, onye na -eme ihe ike na onye okike. N'okwu a ajụjụ bụ isi bụ onye ma ọ bụ gịnị bụ enwe nke anọ?
Maka onye na -egbu serial ọ bụ naanị egwuregwu emebere iji gosipụta ikike ọgụgụ isi ya. Ọ bụ isi okwu e mere maka ndị uwe ojii na -ejedebe na ohere ịchekwa onye ọzọ metụtara.. Mana, site na mmalite onye ogbu mmadụ ahụ na -amalite otu nzọ ụkwụ n'ihu ndị na -akpagbu ya ... Ọ bụ ezie na ọ nwụọla, enwere ike nwee onye ọzọ.
Enwe nke Anọ (Encora & ...
Ruo afọ ise, onye na -egbu ihe nkiri akpọrọ "Enwe nke Anọ" nke ụmụ amaala Chicago na -atụ ụjọ. Mgbe achọtara ozu ya, ndị uwe ojii na -amata ngwa ngwa ọnọdụ siri ike. O doro anya, onye omekome ahụ na -anwa izitere ha ozi ikpeazụ: enwere onye ọzọ aja nwere ike ka dị ndụ.
N'ihi ya, onye nyocha Sam Porter - Onye isi nke otu ọrụ pụrụ iche nke 4MK- na -eche na, n'agbanyeghị na ọ nwụrụ anwụ, atụmatụ ghoulish nke onye ogbu mmadụ ahụ agwụbeghị. Ekwenyere mmetụta a mgbe achọpụtara akwụkwọ edetu n'ime otu n'ime akpa jaket psychopath.
Onye e megburu
Ka ị na -agụ ahịrị ọjọọ ndị enwe nke anọ dere, Porter ghọtara na ọ tọrọ atọ n'ime atụmatụ nzuzu. Tụkwasị na nke a, ọnọdụ mbibi nke ahụ na -eme ka o sie ike ịchọpụta onye gburu ya, ya mere, ọ na -esiri ya ike ịchọta ebe onye ahụ metụtara. Nke ka njọ bụ na ndị uwe ojii anaghị enwe ohere ịchekwa ọdọ mmiri.
Omuma na mbụ
Akụkọ ihe mere eme nke Enwe nke anọ na -akpalite mmetụta ndị nnukwu nka ochie na -enwe na -enyo enyo nke oge a (dịka Nkịtị nke ụmụ atụrụ o Asaa, dị ka ọmụmaatụ). Ka o sina dị, mmepe nke akwụkwọ bụ ihe mbụ. Nke mbu ọ dịghị ihe dị ka onye na -achọpụta ihe na -achụ onye gburu mmadụ, ebe nke ikpeazụ agabigala tupu oge eruo.
N'otu aka ahụ, akụkọ ihe mere eme gụnyere ihe niile dị mkpa ezigbo thriller- Egwuregwu uche dị mgbagwoju anya, nwa agbọghọ nọ n'ihe egwu na -anwụ anwụ, esemokwu na -adịgide adịgide na atụmatụ gbagọrọ agbagọ. Ọzọkwa, akwụkwọ ndekọ igbu ọchụ na -egosi mgbanwe dị adị site na nwata dị ka ọ dị ruo mgbe mmadụ ghọrọ okenye nke gbagọrọ agbagọ n'ezie.
Ọtụtụ n'ime ịkwụ ụgwọ ala nke JD Barker nwetara Enwe nke anọ ọ na -enweta site na mmetụta nkọwa ha. N'ezie, nkọwa eschatological na -adịkarị na akụkọ, n'ihi ya, Ọ bụghị akwụkwọ akwadoro maka ụdị mmadụ niile. Nsonaazụ ya abụrụla akụkọ siri ike, gbara ọchịchịrị ma na -akpasu iwe maka ndị na -agụ akwụkwọ nwere mmetụta.
N'ihi ya Ụdị akụkọ Barker na -enye okirikiri sinima nke dị egwu ma na -atọ ụtọ maka ndị na -egwu egwu. Maka ihe ndị a, imirikiti nkatọ edepụtarala Enwe nke Anọ dị ka akwụkwọ na -agbanwe agbanwe, na -atọ ụtọ ma na -eri ahụ.
Ịbụ nwata, oge uto na ọmụmụ ihe
Jonathan Dylan Barker mụrụ na Jenụwarị 7, 1971 na Lombard, Illinois, United States. O biri ndụ nwata ya niile na steeti ụlọ ya ruo na 1985, ya na ezinụlọ ya kwagara Englewood, Florida. Ebe ahụ, nwetara nzere ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya na Lemon Bay High School (1989). Mgbe e mesịrị, o debanyere aha na Art Art nke Fort Lauderdale iji mụọ nchịkwa azụmahịa.
Barker oru site n'aka Paul Gallota ke magazine Parallel nke 25 n'oge ọ bụ nwata akwụkwọ mahadum. Na magazin ahụ nwere onye ọrụ ibe ya na Brian Hugh Warner (onye mechara bụrụ onye ama ama n'ụwa n'okpuru aha Marilyn Mason kwuru). Otu n'ime ọrụ ndị a ma ama ya bụ ajụjụ ọnụ a gbara ndị otu dị ka Seventeen ma ọ bụ TeenBeat.
Mmalite dị ka onye edemede
Na 1992, Barker malitere igosi nsonaazụ nyocha ya metụtara ihe ndị na -eme na mba kpughere, obere kọlụm akwụkwọ akụkọ. N'ihe yiri ya, o weere nzọụkwụ mbụ ya dịka onye na -ede mmụọ (ghostwriter) mgbe ị na -enyere ndị edemede ndị ọzọ na -apụta aka n'akwụkwọ ha.
Idebe onwe onye edemede
Na webụsaịtị gọọmentị nke onye edemede Illinois, ọ dị ka nke ahụ Stephen King nyere ya ikike iji agwa Leland Gaunt (nke akwụkwọ akụkọ Ihe Ndị Dị Mkpa) mgbe ị gụchara mpempe akwụkwọ mbipụta mbụ nke rapuru. Tụkwasị na nke ahụ, akwụkwọ akụkọ mbụ Barker ghọrọ otu n'ime ndị na -ere ahịa kacha mma Amazon ma họpụta ya maka ọtụtụ onyinye sitere na ụwa mbipụta.
Ewezuga Eze, Barker akpọtụla aha Neil Gaiman, Dean Koontz na John Saul n'etiti mmetụta akwụkwọ ya.. Ugbu a, onye edemede America a bụ otu n'ime ndị ama ama na obodo ya n'ime ụdị ihe omimi, egwu, akụkọ sayensị na akụkọ akụkọ. N'ezie, ndị a bụ ọchịchọ onye ode akwụkwọ zụlitere site na nwata wee jiri ya mee ihe n'ihe odide ya.
Na nke a, ihe edeturu na -egosi na webụsaịtị Barker: “… Ezumike naanị bịara mgbe m nyochachara n'okpuru ihe ndina m opekata mpe ugboro abụọ wee tinye onwe m n'okpuru nchekwa nke akwa m (nke nnukwu anụ mmiri na -apụghị ịbanye), na -ekpuchi isi m nke ọma. Ọ dịghị mgbe ọ gbadara n'okpuru ala. Ọ dịghị mgbe ".
Ozi JD Barker
Daysbọchị Mọnde (1993)
N’etiti Anyị (1995)
Onye Nbibi (1996)
Ụzọ ọjọọ (1997)
Egwuregwu Onye na -akpọ oku (1997)
ụlọ 108 (1998)
Nke Ọdọ (2016).
Usoro ihe nkiri 4MK
Enwe nke Anọ (2017)
Nke ise ịnwụ (2018)
Nwata ọjọọ nke isii (2019).
Akwụkwọ akụkọ na mmekorita ya na James Patterson
Igbu mmadụ n'ụsọ osimiri ruo n'ụsọ osimiri (2020)
Dọkịta (onye na -ede akwụkwọ ya na Dacre Stoker - 2018)
O nwere ihe gbajiri ebe obi ya kwesịrị ịdị (2020)
Egwuregwu Onye na -akpọ oku (2021).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Enwe nke anọ
Ohia nke ikuku ikuku ano